COVID-19 र गोपनीयता मा एप्पल को संसाधन | म म्याकबाट हुँ
COVID-19 र गोपनीयता मा एप्पल को संसाधन
पहिलो क्षणदेखि, जब के महामारी शुरू भएको थिएन, र COVID-१ China चीनमा केन्द्रित थियो, एप्पल पहिले नै यसको विस्तार कम गर्न केहि परियोजनाहरू शुरू गरे। जब यो पहिले नै विश्वव्यापी समस्यामा परिणत भएको छ र विशेष गरी अमेरिकालाई असर गर्न थालिसकेको छ, एप्पलले अधिकाधिक अधिकारीहरूसँग सकेसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरे। एउटा तरिका कार्यान्वयन गर्नु हो एक लक्षण पत्ता लगाउने अनुप्रयोग र वेब पृष्ठ।
यी स्रोतहरू अहिले, विश्लेषण गरिएको छ केही अमेरिकी सीनेटरहरू द्वारा जो समानको गोपनीयताको डिग्री जान्न चाहान्छन्।
1 अमेरिकी सीनेटरहरूले एप्पललाई यसको कोरोनाभाइरस अनुप्रयोग र वेबसाइटको गोपनीयताको हदको बारेमा सोध्छन्।
2 प्रविधिको माध्यमबाट COVID-१ of को अनुहारमा हामीसँग अभिनय गर्ने दुई तरिकाहरू छन्: दक्षिण कोरिया र चीन बनाम स्पेन र संयुक्त राज्य।
अमेरिकी सीनेटरहरूले एप्पललाई यसको कोरोनाभाइरस अनुप्रयोग र वेबसाइटको गोपनीयताको हदको बारेमा सोध्छन्।
हामी समाचारमा डुब्नु भन्दा पहिले, म यो क्षणको लागि गोपनीयतालाई एकपटक राख्नु पर्छ कि हुँदैन भनेर एक क्षणको लागि सोच्न म चाहन्छु। साझा राम्रोको खोजीमा। मलाई केहि व्याख्या गर्नुहोस्। सरकारहरूले भाइरस स crisis्कट कसरी व्यवस्थित गरेको बारेमा संसारभरि समाचारहरूको ठूलो रकम मध्ये हामी चीन र विशेष गरी दक्षिण कोरिया भेट्छौं।
यी एसियाली देशहरूमा एप्लिकेसनहरूको एक श्रृंखला लागू गरिएको छ जसको माध्यमबाट व्यक्ति भाइरसको लक्षणहरूको बारेमा सल्लाह लिन सक्दछ र उनीहरू संक्रमित हुन सक्छ वा सक्दैन। दुबै केसहरूमा मानिसहरूलाई कसरी कार्य गर्ने भनेर सिफारिसहरू दिइन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ हुन सक्नुहुन्छ वा तपाइँ प्रभावित क्षेत्र बाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मोबाइल भौगोलिक स्थिति त्यो व्यक्तिलाई। यदि यो सीमा भन्दा बाहिर गयो भने, एक चेतावनी ध्वनि कि अधिकारीहरु लाई सचेत पनि। यस तरिकाले, त्यस व्यक्तिलाई अरूलाई संक्रमित हुनबाट रोकेको थियो।
प्रयोग राम्रो भएको जस्तो देखिन्छ, तिनीहरू प्रस्तुत डाटा को लागी, र तिनीहरू यसको बारेमा केही गर्वका साथ कुरा गर्छन्।
उदाहरणका लागि, स्पेनमा, त्यस्तै विकल्प सरकारले विभिन्न स्वायत्त समुदायहरूमा पनि लागू गरेको छ। दुबै केसमा, व्यक्तिको भौगोलिक स्थितिमा पुगेको छैन, तर यो आवश्यक छ व्यक्तिगत डेटा को एक श्रृंखला प्रदान गर्नुहोस्। चिन्ता केहि यो डेटा को उपचार हो। स्पेनिश विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि, उदाहरणका लागि, कुकीजको स्वीकृति थोरै भ्रामक थियो र गोपनीयता पार गर्न सकिन्थ्यो। यो छिटो सच्याइयो।
अमेरिकामा, एप्पल, अरूहरू बीच, एक अनुप्रयोग छ र वेब पृष्ठ दक्षिण कोरियाली भन्दा स्पेनिश जस्तै समान। तर अझै, US अमेरिकी सेनेटरहरूले कम्पनीका सीईओ टिम कुकलाई यसका बारे सोधेका छन् दुबै प्लेटफर्मको गोपनीयता को डिग्री। जब व्यक्तिहरूबाट व्यक्तिगत र स्वास्थ्य डाटा स collecting्कलन गर्ने।
प्रविधिको माध्यमबाट COVID-१ of को अनुहारमा हामीसँग अभिनय गर्ने दुई तरिकाहरू छन्: दक्षिण कोरिया र चीन बनाम स्पेन र संयुक्त राज्य।
COVID-१ of को अनुहारमा यी सरकारहरूले गर्ने तरिका धेरै फरक भएको छ, तर हामी जाँदै छौं टेक्नोलोजीमा ध्यान दिनुहोस्। वेब पृष्ठहरू र अनुप्रयोगहरूमा जसले मानिसहरूलाई आत्म-निदान गर्न र तिनीहरूको स्वास्थ्य ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ।
यस मामलामा मसँग एउटा प्रश्न छ। लायक गोपनीयता छोड्नुहोस् स्वास्थ्य कायम गर्न?
यदि हामी COVID-19 को प्रसार लाई रोक्नको लागि यी अनुप्रयोगहरूले योगदान पुर्‍याएको आधारबाट शुरू गर्छौं भने हामी यो भन्न सक्छौं यसलाई त्याग्नु राम्रो हुन्छ हाम्रो गोपनीयता बाहेक बे मा प्रसिद्ध वक्र राख्न र धेरै संक्रमित र मृत छैन।
तर अर्को कुरा सोध्नु वा प्रश्न गर्न, हो कम्पनीहरूले यस लगत पछि के गर्दछ। हामीसँग कुनै ग्यारेन्टी छैन कि कम्पनीहरूले यस डाटालाई अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्, त्यसो गरौं न त सकारात्मक। यस अवस्थामा हामी गोपनीयता छोड्न सक्दैनौं जुन मैले बुझें, प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। कम्पनीहरू प्रयोगकर्ताको सेवामा हुनुपर्छ, अन्य तरिकाको वरिपरि हुँदैन।
यस अवसरमा एप्पलले भनेयो चयन उपकरणबाट तपाइँका प्रतिक्रियाहरू स .्कलन गरिरहेको छैन ", जबकि यसले एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारे केही डेटा स collect्कलन गर्छ भनेर सामान्य सर्तहरूमा। "कुनै व्यक्तिले यसलाई सlects्कलन गर्ने जानकारी कुनै पनि व्यक्तिलाई पहिचान गर्न "" प्रयोग गर्न सकिदैन।एप्पलका अनुसार।
सेनेटर्स स्वीकार गर्छन् कि एप्पल भन्छ सफ्टवेयर को लागी "एक प्रयोगकर्ताको एप्पल आईडी संग लगईन वा सम्बन्ध आवश्यक पर्दैन, र व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता प्रतिक्रियाहरूको आवश्यक पर्दैन।" तिनीहरू एप्पल वा कुनै सरकारी संगठनमा पठाइने छैन। "
यस्तो देखिन्छ कि सबै कुरा क्रमबद्ध छ, एप्पलले जहिले पनि गोपनीयताको आफ्नो दृष्टिमा गर्व गर्दछ, तर उनीहरू अझै पनि टिम कुकले अझ विस्तृत रूपमा प्रतिक्रिया दिन चाहन्छ कि यसले यी केसहरूमा गोपनीयता कसरी व्यवहार गर्दछ।
के तपाईलाई लाग्छ? गोपनीयता गौण हुनु पर्छ संकटको यी अवस्थामा? के तपाई त्यो सोच्नुहुन्छ? प्रयोगकर्ता गोपनीयता आवश्यक छ र यो सबै खर्च मा राख्नु पर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » COVID-19 र गोपनीयता मा एप्पल को संसाधन
टेलीग्राम लाइट पनि फोल्डरहरू स्वागत गर्न अपडेट गरिएको छ
होमपड र कर्मचारीहरूका लागि प्रस्तावमा बीट्स